Dastabej » नार्कको सफलता, थप पाँच नयाँ प्रजातीका दलहन बाली अविष्कार
नार्कको सफलता, थप पाँच नयाँ प्रजातीका दलहन बाली अविष्कार – Dastabej
१५ असार २०७९, बुधबार । 2022/06/29
नार्कको सफलता, थप पाँच नयाँ प्रजातीका दलहन बाली अविष्कार
नेपालगन्ज । कृषि अनुसन्धान केन्द्र (नार्क) खजुरा अन्र्तगतको कोशेबाली अनुसन्धान कार्यक्रमले पाँच प्रकारका दलहन बाली किसानका लागि सिफारिस गरेको छ । बैज्ञानिकहरुको लामो अनुुसन्धान र परीक्षणपछि उक्त बाली सिफारिस गरिएको हो । बाँके र बर्दियामा दलहन बालीको ब्यवसायिक खेती हुननसकिरहेका कारण कृषि बैज्ञानिकहरुले अनुसन्धान गरी विकासित बालीको उन्मोचन गरेका हुन । पछिल्लो पल्ट कृषि बैज्ञानिकहरुले खजुरा मसुरो ४, श्रद्धा कालो मसुरो, रामपुर मास, खजुरा मास १ र नयाँ प्रजातिको प्रतिज्ञा मुग किसानका लागि सिफारिस गरिएको छ । हालसम्म नार्कले ४५ प्रजातिका दलहन बाली सिफारिस गरिसकेको छ । तर यस क्षेत्रमा भने व्यवसायिकरुपमा खेति हुनसकेको छैन । नार्कले नयाँ प्रजातिका दलहन बालीको मुल बीउ उत्पादन गरी बीउबीजन कम्पनी र सहकारीहरुलाई बिक्री गर्दै आएको छ । तर किसानहरु उक्त बीउ प्रति आर्कषित हुननसक्दा खेतिका लागि आवश्यक पर्ने बीउ उत्पादनमै समस्या देखिएको छ । नार्कले उत्पादन गरेको बीउ बारे किसानहरु जानकारी नपाउ“दा पनि बीउ उत्पादनमा समस्या भएको हो । खुला सीमा कारण नेपाली किसानहरु भारतबाट पनि बीउ ल्याउने गरेका छन् । कोशेबाली कार्यक्रममा संयोजक वरिठ बैज्ञानिक डा. राजेन्दै दराईले भौगोलिक दष्टिकोणले बाँके बर्दिया दलहनका लागि राम्रो सम्भावना भएता पनि मसुरोबाहेक अन्य दलहनबालीको क्षेत्र विस्तार हुन नसकेको बताउँछन् । जसका कारण उत्पादन बृद्धि हुनसकेको छैन । उनका अनुसार कुल कृषि खेती योग्य जमिनको ११ प्रतिशत जग्गामा दलहनको खेती हुँदै आएको छ । ‘दलहन बाली नगदे बाली हो । नेपाली किसानले परापूर्वकाल देखिनै खेति गर्दै आए पनि व्यवसायिक हुनसकेको छैन,’ वरिष्ठ बैज्ञानिक डा. दराईले भने ।
बर्षे बाली भटमास, मास, मुंग, रहर, सिल्टुङ र हिउ“दमा मसुरो, चना, राजमा, खेसरी, बकुल्ला बालीको खेति हुन्छ । दलहन बाली मध्ये मसुरो क्षेत्र, उत्पादन र उत्पादकत्वको हिसाबले प्रमुख बाली मानिएको छ । नेपाली मसुरोको स्वाद, पौष्टिक महत्व, सुक्ष्म खनिज तत्व (फलाम र जिंक), आकार, छिटो पाक्ने गुणले गर्दा बंगलादेश, जापान, भारतमा लोकप्रिय छ र निर्यात पनि हुने गरेको छ । कोशे बाली रोग बैज्ञानिक डा. लक्षमण आर्यालले रोग, किरा, झारपात, अजैविक कारणले पनि दलहन बालीको उत्पादनमा कमी आएको बताउ“छन् । उनका अनुसार खेती लगाउने समय सुक्खापन, हिउदे वर्षा, खडेरी, शितलहरी, सामाजिक र प्राविधिक कारणले पनि समस्या भएको हो । ‘उन्नत बीउ समयमा पाईदैन । खेती गर्न प्राविधिक ज्ञान अधिकांश किसानसंग छैन,’ उनले भने,‘उत्पादित वस्तुको मूल्य बजार नहुनु र भारतसंगको खुला नाकाको कारणले सजिलै भारतिय दलहनका जात नेपाल भित्रिन्छ ।’ उनले किसानहरुले नेपाली दलहनका जातका बीन प्रयोग नगर्ने र ज्ञान नभएका कारण स्थानिय दलहनका जातलाई उन्नत जातले प्रतिस्पादन गर्न नसकेको बताए ।
दलहन बालीको ब्यवसाहिक खेती गरी उत्पादन बढाउन सके किसानहरुको आर्थिक सुरक्षामा सुधार हुने गरी नार्कले विभिन्न कार्यक्रम सन्चालन गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय दलहनको खेतीको महत्व बारे जानकारी दिन र किसानका समस्या पहिचान गर्न तालिम आयोजना भइरहेका छन् ।
४ चैत्र २०७७, बुधबार १०:१३ प्रकाशित
विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि एकीकृत प्रयास आवश्यक
सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न ट्रेड युनियनको माग
१.	राप्ति नदिमा मलामी गएका दुई जना डुबेर बेपत्ता
२.	नेपालगन्जको सभ्य पाइला सुधारकेन्द्रमा एक जनाको मृत्यु
३.	सुधार केन्द्रमा मृत्यु भएका हिकम्त थापाको शरीरभरी निलडाम
४.	रोल्पा कारागारमा मृत्यु भएका नेपालगन्जका हरिजनका नाममा छुटेका शाह भारतीय जेलमा
५.	राप्ती नदिमा दुई जनाको शव फेला
६.	प्रधानमन्त्री पत्नी डा. आरजु राणा बर्दिया १ बाट निर्वाचनमा लड्ने तयारी
७.	प्लान इन्टरनेशनल नेपाल कर्मचारीहरुलाई मुद्दा लगाउन मै व्यस्त